I-Pigzbe usetyenziso olufundisa abantwana malunga ne-imali yedatha | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UMelisa Perrotta | | Idizayini yeMifanekiso, Ukuphefumlelwa, Bugcisa
Esi sicelo senziwe nguFilippo Yacob sigxile kubantwana abangaphezulu kweminyaka emithandathu ubudala. Isebenza ngathi ibhanki yeehagu apho abantwana banokugcina imali ebonakalayo. Injongo yayo kukufundisa malunga ne-cryptocurrency ngelixa ukhuthaza ukonga.
Isicelo sisebenza nge Inkonzo yeBlockchain ebizwa ngokuba yiWollo, eyokuqala eyilelwe ngokukodwa abantwana. Ngale ndlela, ikhuthaza abantwana ukuba bonge imali kuluntu olungenamali, ekunzima ukuba kusetyenziswe ii -apps zokulondolozwa kwe-piggy ezingavumeli ukuhanjiswa okuncinci okanye ukubiza imali eninzi.
Ngokuka-CEO u-Yacob, Ukufunda malunga nemali kwangoko kubalulekile ekuphuhliseni imikhwa elungileyo yemali. Nangona kunjalo, ulumkisa ukuba oku kunokuba bubunzima kubantwana banamhlanje ngenxa yokulahleka kwemali. Ukunyamalala kwale nto kunokuba yingxaki ekufundiseni iinkqubo zeemali nakwimali yabantwana.
Kwelinye icala, isigqeba solawulo sikwachaze ukuba xa kukhangelwa izicelo zebhanki zonyana wakhe; ayifumaneki akukho nto inokukuvumela ukuba wenze iintlawulo ezincinci. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa ezi bhanki ze-piggy zedijithali zikwahlawulisa ukuya kuthi ga kwiisenti ezingama-50 ngokudluliselwa kwipesenti ezingama-50.
Xa kuthelekiswa nokhuphiswano I-Pigzbe isebenzisa usetyenziso ukuhambisa imali isuka kumzali iye emntwaneni. Yenziwe ngohlobo lohlobo lomdlalo wokuntywila, onamandla wokuzonwabisa kunye nokusetyenziswa okunomdla. Endaweni yoko, abantu abadala basebenzisa uhlobo olulula.
Yenziwe yifayile ye- isixhobo esisebenza ngokudibeneyo nesicelo sokudlala. Ngale ndlela, ukonga ngumsebenzi omnandi. Elona candelo lililo kukuba livumela iintsapho ukuba zigqithise ubuncinci bemali kwimizuzwana.
Iqulethe i-pink remote ukuze abantwana bakwazi lawula imidlalo kwaye ufumane izaziso ezivela kumalungu osapho. Ngakolunye uhlangothi ulawulo olumnyama lugcinelwe abazali abanokugcina iimali zeWollo ngaphandle kweintanethi.
Okokugqibela, ikwavumela ukuba ulandele konke ukuthengiselana okanye ukuthengwa okwenziwe ngabantwana. Oku kwenzelwa umbulelo kwiKhadi leWollo, elinokusetyenziswa ngabantu abadala okanye abantwana kwiivenkile ezininzi ezikwi-Intanethi nakwiintanethi. Ukongeza, ikhadi lenza ukuba abazali bathintele abantwana babo ekuthengeni utywala, icuba nabanye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » I-Pigzbe usetyenziso olufundisa abantwana malunga ne-imali yedatha
Iingcebiso ze-4 zokuba yeyokuqala kwiinjini yokukhangela zikaGoogle